Tag: xayeysiisyada facebook | Martech Zone
Tag: xayeysiisyada facebook
Isniintii, September 7, 2020 Talaado, Febraayo 9, 2021 Douglas Karr
Waxaan nahay taageerayaal waaweyn oo Depositphotos ah, sawir kayd ah oo la awoodi karo, muuqaal, iyo xalka fiidiyowga. Waa sababta aan ugu liis garaynay inay yihiin kafaala qaadayaal oo aan u sii wadno kor u qaadista adeegyadooda boggeena iyo macaamiisheenna. Dabcan, sidoo kale waxaan nahay xiriiriye. Kooxda ka dambeysa Depositphotos ayaa hadda bilaabay Crello, tifaftire muuqaal oo bilaash ah oo ku shaqeeya malaayiin sheybaallo qurux badan. Xusuusin Canva (oo aan u baahnayn is-qoritaan), Crello waxay bixisaa in ka badan 10,500 sawirro bilaash ah, oo ay ku jiraan sawirro,